Mahad Karatay oo DF hore u sheegtay in la dilay oo soo hadlay | KEYDMEDIA ONLINE
Mahad Karatay oo DF hore u sheegtay in la dilay oo soo hadlay
Sargaalka aadka loo raadiyo ee Mahad Karataay, oo Dowladda Fadaraalka ay hore u sheegaty in la dilay ayaa ka soo muuqday, muuqaal lagu soo aadiyay munaasabadda ciida.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sargaal sare oo ka tirsan Kooxda Al-Shabaab, oo Dowladda Fadaralka Soomaaliya, hore u sheegtay in la dilay ayaa ka soo muuqday muuqaal ay baahisay Mu’asasada Al-Kataa’ib ee muuqaallada u sameysa Kooxda Al-Shabaab.
Bayaan dhowr arrimood taabanaya oo ka soo baxay hoggaanka Sare ee Al-Shabaab, ayuu ka soo muuqday Cabdiraxmaan Mahad Warsame oo loo garan ogyahay, Mahad Karataay, kaas oo hore Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya Sheegeen in la dilay.
Billowgii bishii Febaraayo ee Sanadkii hore, Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka Soomaaliya ‘NISA’ ayaa sheegtay in Mahad Karatay laga raacdeyay shaqadii uu u hayay Al-Shabaab, markii isaga iyo Bashiir Qoor-gaab ay Axmed Diiriye, ka diideen, qaraxyada ay kooxdu ka geysato Caasimadda Soomaaliya.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayaa Mahad Karatay, ku daray hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab ee ku jira liiska cunaqabateynta, halka Dowladda Mareykanka ay madaxiisa dul dhigay ShanMalyan oo doolar.
Mahad Karataay, oo dadka qaar rumeysan yihiin inuu yaahay Kuxigeenka hogaamiyaha (amiirka), ayaa door muhiim ah ka qaatay weerarkii 2-dii Abriil, 2015 lagu qaaday Jaamacadda Gaarisa University ee ay ku dhinteen 150 qof.